Yintoni i-smartwatch | Iindaba zeGajethi
Kwiminyaka yakutshanje sibonile indlela uhlobo olutsha lwesixhobo oluye lwaba yinto exhaphake kakhulu kubasebenzisi abaninzi. Ukuba igama elithi smartwatch siliguqulela ngqo esiNgesini, sifumana igama elithi smartwatch, igama elingasichazanga ngokupheleleyo, kuba I-smart incinci kakhulu.
I-Smartwatches, ukusukela oko bafika kuqala kwintengiso ngePebble, babe zizixhobo eziphinda-phinda izaziso esizifumanayo kwi-smartphone yethu. Kodwa kule minyaka idlulileyo, inani lemisebenzi abayinikelayo inyukile. Ukuba ufuna ukusombulula onke amathandabuzo malunga nolu hlobo lwesixhobo, siza kuchaza apha ngezantsi yintoni iwatchwatch.
Iimodeli zokuqala ezifika kwimarike, zanikezela ngemisebenzi embalwa kakhulu xa kuthelekiswa nale ikhoyo, kungoko uluntu oluncinci lwaluncinci kakhulu kwaye yayingenanjongo yokubona umntu esitalatweni kuyo nayiphi na le modeli. Ukuphindaphinda izaziso ze-smartphone kunye nokuxelela ixesha yayiyeyona misebenzi iphambili osinike yona, umsebenzi ngaphezu kokwaneleyo ukuqaphela ukuthengwa kwayo, kuba kuthintelwe ukuba ngalo lonke ixesha ujonge kwi-smartphone ukubona ukuba eso sandi sasivela kwi-smartphone okanye kwindalo esingqongileyo.
1 Iimpawu zeSmartwatch
2 Ukuhambelana kweSmartwatch
3 Ukulinganisa iisongo
4 Ukwenza umntu kwii-smartwatches
5 Uyithenga phi i-smartwatch?
Uthotho lweApple 4 LTE
Kodwa njengokuba iminyaka ihambile, ii-smartwatches zamkele ubuchwephesha obuninzi kwaye namhlanje, sinokufumanisa ukuba uninzi lweemodeli azibalanga nje kuphela amanyathelo emini, kodwa zikwasibonisa ukubetha kwentliziyo (isilumkisa ukuba siphezulu kakhulu) , yenza i-electrocardiograms, Bafumanisa ukuphakama kunye nokuwa kwabasebenzisi kwaye bazise iinkonzo zikaxakeka ukuba umsebenzisi akahambi, badibanisa iGPS kwaye, ngokuxhomekeke kwimodeli, basivumela ukuba senze umnxeba.
Kodwa ayisivumeli nje ukuba silinganise umsebenzi wethu wemihla ngemihla, kuba ikwasivumela ukuba sidlale umculo wethu owuthandayo, oko kukuthi, sisebenzisa i-headset yeBluetooth, ukulawula i-automation yekhaya lethu, ukuthumela imiyalezo, ukuphendula iifowuni , Ukubonisana ne-imeyile yethu ... okanye ukudlala, nangona kusengqiqweni Amava asinika wona ngale ndlela ahlala eshiya okunqwenelekayo.
Zonke ii-smartwatches ezinjalo, zinazo, ngokuthe ngqo kwisixhobo okanye nge-smartphone edibene nayo, ukubanakho ukufaka usetyenziso lomntu wesithathu, Ukuze bandise imisebenzi abasinika yona, eminye yayo engaqondakaliyo ayifumaneki ngokwendalo. Ukongeza, ikwasinika inani elikhulu leendawo zokujonga, ukwenza ukubonakala kwesixhobo sethu, ukuze sikwazi ukulungelelanisa ukuthanda kwethu.
Ezi ndawo zokubukela ziyavumela ukongeza iingxaki. Iingxaki zizongezo ezincinci esinokuzongeza kwindawo yokubukela kwaye zisibonisa ulwazi oluvela kwezinye izicelo, ezinje ngemozulu, ukuqeshwa kwe-ajenda elandelayo, inqanaba lokungcola kwendalo ...
Ngokungafaniyo nehlabathi lee-smartphones, apho sinokufumana khona izixhobo ezine-iOS kunye ne-Android, kwihlabathi leewatchwatches esinazo inani elikhulu leemodeli, iimodeli ezilawulwa ziinkqubo ezahlukeneyo zokusebenza. Ukuba sithetha ngeenkqubo ezisebenzayo kwezi zimbini zinkulu, i-iOS kunye ne-Android, kwintengiso esinazo ziiswatchwatches ezilawulwa yi-watchOS (iOS) kunye ne-wearOS (Android).
Ukuhambelana okunikezelwa yi-iOS kunye ne-watchOS kunye ne-Android nge-wearOS asiyi kuyifumana ukuba siwela amaqonga, ke ukuba ufuna ukufumana okungcono kwisixhobo sakho, eyona nto unokuyenza kukukhetha imodeli ekufaneleyo. Kwimeko ye-iPhone yi-Apple Watch ngelixa kwimeko yayo nayiphi na i-Android terminal nayiphi na imodeli elawulwa yi-wearOS.
Ukuba asikhathali ukuthatha ithuba kuyo yonke imisebenzi ezinokusinikwa zezi zixhobo, kuba eyona nto ingayibiziyo bubuhleUkongeza kokufumana izaziso, ukuba singabasebenzisi be-iPhone, sinokudibanisa nasiphi na isixhobo esilawulwa yi-Wear OS, enkosi kwisicelo esifumaneka kwiVenkile ye App. Nangona kunjalo, sinako kuphela thenga iApple Watch ukuba sine-iPhone, kuba iApple ayisiniki sicelo kwiVenkile yokuDlala ukuze siyisebenzise kule ecosystem.
Ukongeza kwi-watchOS kunye ne-wearOS, sinokufumana izixhobo ezilawulwa I-Tizen, inkqubo yokusebenza yobunini be-brand yaseKorea i-Samsung. Kwiminyaka embalwa, i-Samsung iyilahlile kwaphela i-wearOS, ngaphambili i-Android Wear, kuzo zonke iiwotshi zayo ezihlakaniphile, ezilawulwa yiTizen, inkqubo yokusebenza enganiki kuphela ukusetyenziswa kwebhetri esezantsi, kodwa nokusebenza kukhulu kakhulu xa kuthelekiswa ne-wearOS.
Ngaphakathi kwii-smartwatches, kufuneka sikhankanye uluhlu olubanzi lweemodeli umenzi uFitbit azenza zifumaneke kuthi, umenzi oza kwintengiso ethengisa izacholo zokulinganisa kodwa ekuhambeni kwexesha, nasemva kokuthengwa kwePebble, uyayazi indlela yokuziqhelanisa namaxesha amatsha.
Asinakuyeka ukuthetha ngeebhendi zequantizer, ekwabizwa ngokuba zii-smartwatches ngabathile, nangona umsebenzi wabo ujolise ikakhulu rekhoda yonke imisebenzi yemihla ngemihla esiyenzayo, Nokuba uhamba, ubaleka, uhamba ngebhayisekile ... Kwaye ndithi banokubizwa ngokuba ziiwatchwatches, kuba ezinye iimodeli ziyasivumela ukuba sifumane izaziso, nangona abasivumeli ukuba sibaphendule okanye sifumane iminxeba, ngokungathi singenza ngee-smartwatches ezilawulwa yiTizen, ii-watchOS kunye ne-wearOS.
Izinto zokulinganisa, awunayo ivenkile yeapp eyakho ukufaka usetyenziso lweqela lesithathu, ke inani lemisebenzi asinika yona lilinganiselwe ngokukodwa kwaye ngokukodwa kulowo unikezelwa ngumenzi.
Ukwenza umntu kwii-smartwatches
Zonke ii-smartwatches zentengiso ziyafumaneka kwimibala eyahlukeneyo yebhokisi kunye neentlobo ezahlukeneyo zemitya, ukuze ukwazi ukuyidibanisa nempahla yethu yemihla ngemihla, nokuba yeyesuti kunye netayi yokuya kumsitho okanye ukuya emsebenzini, Ngempahla yazisa okanye ngezemidlalo. Ngale ndlela, umenzi onokhetho oluninzi olufumanekayo kuthi yi-Apple.
I-Apple Watch isinika inani elikhulu leentambo zazo zonke iintlobo, izixhobo kunye nemibala, ke ukuba uyimfashini ye-maniac kwaye uyathanda ukuhlala udityaniswa, iApple Watch sisixhobo osifunayo, ukuba une-iPhone, njengoko benditshilo ngaphambili. Umenzi wesibini owenza ukuba nathi sifumaneke Inani elikhulu leentambo yi-Samsung kunye noluhlu lweGear S / Watch, njengeFitbit enoluhlu lwazo lweewatchwatches.
Ukuba sithetha ngokwenza ngokwezifiso ii-quantifiers, ii-bracelets ze-Xiaomi Mi Band zezona zisinika inani elikhulu leentambo ukuze zilungiselele isixhobo kwaye ke sikwazi uyilungelelanise neempahla esizinxiba yonke imihla okanye umsitho.
Uyithenga phi i-smartwatch?
Bonke abavelisi benza ukuba kufumaneke kubasebenzisi ithuba lokuthenga izinto zabo ngqo kwiwebhusayithi yabo, iwebhusayithi apho phantse singaze sifumane khona, ukuba singaze sifumane izibonelelo. Zonke ngokuchasene nokwenzekayo eAmazon. Nazi amakhonkco aliqela apho ungathenga khona amaxabiso ezona smartwatches ziphambili kunye nezixhobo zokulinganisa kwiAmazon.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » Yintoni i-smartwatch